On: -Ahụ 26Author: haIge: A gam akporo, Cell ekwentị Nledo, Cell ekwentị Ndepụta, Ọrụ nlekota oru, Wụnye Mobile Nledo, Nwata nu ay!, iPhone 5s Nledo Software, Ekwentị mkpanaaka nlekota oru, Mobile Nledo, Mobile Nledo Online, Nyochaa Internet-eji, Nne na Nna Control, Nledo Facebook ozi, Nledo N'ihi gam akporo, Nledo N'ihi iPhone, Nledo iMessage, inyocha Mobile ama, Nledo na Oku, Nledo na SMS, Nledo Skype, Nledo Viber, Nledo WhatsApp, Track GPS Location Ọ dịghị Comments
Na ExactSpy-Track Contact Cell Phone Remotely i nwere ike na-ele niile ekwentị akwụkwọ Ndenye ọ bụla Android, iPhone Target ekwentị.
Lee ekwentị niile akwụkwọ Ndenye na Target ekwentị
Lee niile aha na nọmba na metụtara ọ bụla Kpọtụrụ
All Ndi ana-akpo uploaded n'ime gị weebụ akaụntụ Dashboard
Na n'ụwa taa, ị ga-amara akọ mgbe ọ na-abịa na-atụkwasị obi na-gị na ụmụ gị na-nghọta si na ọ bụ onye gị na ndị ọrụ na-ezukọ na. ExactSpy-Track Contact Cell Phone Remotely na-ewepụta gị azụ na akwọ ụgbọala oche site n'ikwe gị enyocha maka ihe ọ bụla-enyo anyị enyo kọntaktị Ndenye na onye ọrụ ngwaọrụ.
Inwe ohere na ekwentị akwụkwọ na-ahapụ gị maara kpọmkwem ndị gị Target ọrụ bụ na kọntaktị na. Bụ gị Target-ekwurịta okwu ndị ha na-ekwesịghị ịdị na-? Ị na-ahụ nọmba ekwentị na-egosi n'okpuru a dị iche iche aha now? ExactSpy enye gị ohere iji anya site niile aha na nọmba na, na ị ga a na Ama kọntaktị onwe gị dị nnọọ bụrụ na mgbe ị na-mkpa ọ.
Yiri ihe online okwu akwụkwọ, ExactSpy enye gị mfe ohere ndị gị chọrọ iru. Gị niile na kọntaktị (okwu akwụkwọ) echekwara ebe a. Pịa kọntaktị History ke top n'akụkụ aka ekpe gị akara panel iji nweta ma hụ na kọntaktị 'ozi site iche ngwaọrụ.
Gịnị mere ị ga-ahụ nke a mma bara uru?
Nke a na ExactSpy software na-arụ ọrụ stealth mode, nke pụtara na ọ bụrụ na onye na-eji na ekwentị gị maara na ị na arụnyere na software, ọ ga-enwe ike ịchọpụta ya. Otú ọ dị, na-n'uche na nzuzo iwu nwere ike imetụta otú i nwere ike iji ngwa a, ya mere n'aka na ị na mbụ gakwuru onye ọka iwu banyere obodo na gọọmenti etiti iwu.
ExactSpy ndụmọdụ magburu onwe support nhọrọ ma ọ bụrụ ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ na-enwe nchegbu mgbe ị na-na iji ngwa a. The ExactSpy website has a user guide with instructions on how to use the tools and features in this phone tracker application. The website nwekwara a zuru ezu Ajụjụ ngalaba. Nke a mobile nlekota oru ngwa nwere email, ekwentị na-ebi ndụ chat support.
← Track Cell ekwentị Nchọgharị History